WordPress: Ihe mgbakwunye SEO abụọ maka Meta Tag Creation | Martech Zone
Wednesday, July 4, 2007 Tọzdee, Machị 31, 2016 Douglas Karr
Edeela m ederede abụọ dị iche iche maka ịmepụta mkpado meta nke saịtị gị, isiokwu ya na nkọwa. Isiokwu ga-enyere aka na saịtị gị ịchọta, ma nkọwa ga-enyere ndị ọbịa na-achọ nchọta aka aka site na ịnye nkọwa ka mma.
Kama mmemme nke njikarịcha ndị a dịka m tụrụ aro, enwere plugins di na nwunye nwere ike ịrụrụ gị ọrụ ahụ.
Na Yoast SEO ngwa mgbakwunye ị nwere ike ijikwa peeji Google gosipụtara na nsonaazụ ọchụchọ ya yana peeji ndị ọ na-egosighi. Yoast ọ bụghị naanị na-enyere gị aka ịkọwapụta nkọwa meta, ọ na-enyekwa gị nzaghachi na ojiji nke isiokwu gị na nyocha mara mma nke otu peeji gị ga-esi lee anya na peeji Nchọpụta Nchọgharị.
Yoast na-enyekwa nhọrọ nke Adịchaghị Add-On SEO plugins na m ga-ekwusi ike.
Ihe niile na otu SEO Pack
John Chow tụrụ aro na Niile na Otu SEO Pack Plugin ma onweghi mgbe m lere anya nke ọma na ngwa mgbakwunye ruo n'abalị ụnyaahụ. Ihere mebe m. Ihe mgbakwunye ahụ na-arụ ọmarịcha ọrụ na iji “Nhọrọ Gị” na WordPress dị ka nkọwa otu peeji gị.
Nke a bụ otu nsonaazụ ọchụchọ ahụ si ele (ị nwere ike pịa oyiyi ahụ iji hụ ọkwa ahụ):
Nke ahụ kwuru, All in One SEO Pack na-arụ nnukwu ọrụ na nkọwapụta Meta Tag, mana ekwenyeghị m na ọ na-arụ ọrụ dị mma na isiokwu Meta Tag. Naanị ya na - ekenye ndị ahọpụtara ahọpụtara gị dị ka isi okwu maka post gị, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkọwa zuru oke. Nwere ike ịtọ mkpụrụ okwu ndị ọzọ maka post, mana anaghị etinye ha n'ọrụ ebe ọ bụla.
Nke ahụ bụ ebe mgbakwunye mgbakwunye mgbakwunye m ọzọ na-abata, Ultimate Tag Warrior. Nke a bụ otu esi eme ka ị ghara ide ederede isiokwu iji All na Otu SEO Pack, gbanyụọ nhọrọ Jiri edemede maka META Keywords:
Ugbu a oge ọ bụla ị dere blog post, gbaa mbọ jupụta na Nhọrọ Nhọrọ site na ahịrịokwu ole na ole ga-eme ka ndị ọzọ chọọ pịa pịa post gị:
Tags: niile na otu seo packihe mgbaru ọsọnkọwa nkọwameta mkpadoAyoast seo
Jul 9, 2007 na 7: 55 AM
Kwekọrịtara gị maka ijikọta plugins abụọ ahụ, Douglas. M tinyechara All In One n'oge na-adịbeghị anya n'otu saịtị m yana ọ bụ nnukwu ngwa mgbakwunye mana, dịka ị na-ekwu, isi okwu abụghị nke kachasị ukwuu. Nke a na-ekwu na mmasị Google adịghị etinye oke ibu na Keywords ma na-elekwasị anya na aha na nkọwa kama.
Julaị 12, 2007, elekere 3:19 nke ehihie
Daalụ maka nke a. Mpempe akwụkwọ nhọrọ bụ ihe m ji mee ihe n'oge gara aga mana ọ bụghị nke ọma dịka m nwere ike. Ọtụtụ n'ime akwụkwọ akụkọ m kacha ewu ewu na-efunahụ akụkụ kpamkpam.
Aga m azụ azụ hụ na post m 20 kacha ewu ewu nwere akụkụ dị mma, yana akwụkwọ ọhụrụ ọ bụla m na-ede n'ọdịnihu. Aga m elekwa anya na ngwa mgbakwunye SEO ahụ.
Ọgọstụ 21, 2007 na 1:52 ehihie
> Ọ ga-abụ ihe ịtụnanya ma ọ bụrụ na ndị edemede abụọ a nwere ike tinye isi ha ọnụ wee jikọta plugins abụọ ahụ n'otu.
Mkpọ SEO nwere ike iji mkpado sitere na UTW dị ka isi okwu ma ọ bụrụ na ịtọọ nhọrọ a, mana dịka ị na-akwado, ị nwekwara ike hapụ UTW jikwaa mkpụrụokwu meta. Dị ka ị maara ụdị ikpeazụ UTW bụ fin, n'ihi na WordPress 2.3 ga-enwe nkwado mkpado arụnyere. Mkpọ SEO ga-akwado aha mkpado n'oge adịghị anya, ma UTW na WordPress 2.3. Ọ bụrụ na ị nwere arịrịọ ntinye aka ọzọ mee ka m mara.
Septemba 14, 2007 na 7:40 ehihie
Daalụ maka aro ndị a.
Dịka onye ọ bụla ọzọ, enwere m plugins ndị a na blọọgụ m. Mana ọ dị ka ha na-akagbu ibe ha n'ụzọ ụfọdụ. Daalụ maka ụzọ bara uru nke ime ka ha na-arụkọ ọrụ ọnụ.
Dee 16, 2007 na 10: 06 AM
Ezi echiche na nke a. Meta mkpado bụ akụkụ dị mkpa nke ịmepụta ihe ịga nke ọma, yana search engine enyi na enyi, ọnụnọ weebụ.
Ọ bụ echiche na-atọ ọchị na-ekwu maka mkpado isiokwu meta. Anyị niile yiri ka anyị na-eji ya. Anọ m na-ebuli weebụsaịtị maka ihe karịrị afọ 10, site na azụ tupu anyị achọpụta na anyị na-ebuli elu! Taa, anyị maara na isi engines adịghị ọbụna anya na Keywords mkpado ... ma ọ bụ otú anyị na-eche na agbanyeghị.
Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, gịnị kpatara anyị ji eji mkpado isiokwu meta? N'ihi na ndị ole na ole engines si n'ebe ndị ka na-ele Keywords mkpado? Obi abụọ na-enweta ọtụtụ okporo ụzọ (ọ bụrụ na ọ bụla). N'ihi omenala? Eleghị anya. Ọ bụ ihe ijuanya na m ka na-eji ha eme ihe.
Kedu ihe bụ uche gị banyere nke a?
Dee 16, 2007 na 10: 44 AM
Mkpụrụokwu Meta nwere ike ọ gaghị adị mkpa maka nnukwu engines, mana enwere ike ịmepụta ha na-akpaghị aka site na mkpado gị (nke dị mkpa maka okporo ụzọ). Na nkọwa meta nwere ike ịbawanye CTR gị nnukwu oge.